Ungatshala kuphi ezimakethe zamasheya | Ezezimali Zomnotho
Ungatshala kuphi ezimakethe zamasheya
UClaudi Casal | | Ibha
Ukunquma ukuthi uzotshala kuphi ezimakethe zamasheya kunzima uma ungazazi izinhloso ezizolandelwa. Kwesinye isikhathi ngikuthola kunzima ukunquma ukuthi ngizokwenzelani ngokwami, hhayi ngoba ngishoda ngemibono, kepha ngoba ngilinda umzuzu ofanele. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi akukhona konke ukutshalwa kwezimali okwenza umqondo ofanayo. Abanye banqunywa isikhathi sabo ngesikhathi, abanye ngenani elitshaliwe, futhi nenhloso yotshalo-mali. Akufani konke.
Inzuzo enkulu yezikhathi zamanje, yize kunenkinga yomhlaba, lokho imikhiqizo eminingi yesitoko iyatholakala emphakathini ngenjwayelo. Futhi uma singeke sikwazi ukutshala kulokho esikufunayo ngqo, singakwenza nangezinye izindlela. Isibonelo, ama-ETFs akwazi ukuxazulula ingxenye yalezi zinkinga umtshalizimali omncane azifunayo. Ezinye zazo zihlobene nokutshalwa kwezimali kuma-indices, amabhondi kahulumeni, okuyinto ngokwesiko eyayiyinkimbinkimbi kakhulu futhi yayidinga izizumbulu zemali. Ngalesi sizathu, futhi maqondana nezikhathi zamanje, sizobona ukuthi yiziphi izinketho esinazo nokuthi singatshala kuphi ezimakethe zamasheya ngokwezinhloso ezilandelwayo.
1 Izinketho zokwazi ukuthi uzotshala kuphi emakethe yamasheya
2 Yini okufanele uyicabangele lapho ukhetha ukuthi uzotshala kuphi
2.1 Umehluko phakathi kokutshalwa kwemali nokucatshangelwa
Izinketho zokwazi ukuthi uzotshala kuphi emakethe yamasheya
Kukhona uhlu olude lwemikhiqizo nezinto ongakhetha kuzo emhlabeni wokuhweba. Phakathi kwalokhu okukhona okwazi ukuthi yikuphi okulungile kithi lapho sizotshala khona emakethe yamasheya kukhona okulandelayo:
I-forex: Yimakethe yezimali yamazwe angaphandle eyehlisiwe. Yazalelwa ukwenza lula ukugeleza kwemali okutholakala ekuhwebeni kwamazwe omhlaba.
Ama-Raw material: Kulo mkhakha singathola izinto zokusetshenziswa eziyinhloko ezisetshenziselwa ukukhiqizwa njengethusi, uwoyela, i-oats ngisho nekhofi. Kukhona nezinsimbi eziyigugu ezifana negolide, isiliva noma i-palladium kulo mkhakha.
Izenzo: Kuyinto eyaziwa kakhulu ngokwenza kahle. Kulolu hlobo lwemakethe singathenga "izingxenye" ​​zezinkampani futhi sizuze ekuziphendukeleni kwazo noma silahlekelwe. Konke kuzoncika enkampanini okuthengwe amasheya ayo. Singathola futhi ama-stock indices emazweni afana ne- India.
Izikweletu, Amabhondi nezibopho: Le makethe ibonakala ngokuthengwa nokuthengiswa kwezibambiso zezikweletu, zombili izinkampani nezikahulumeni.
Okuphuma kwezezimali: Yimikhiqizo enenani elisuselwa kunani lenye impahla, imvamisa okuyisisekelo. Kunezinhlobo eziningi zazo, ama-CFD, izinketho, ikusasa, ama-Warrants ...
Izimali Zotshalomali: Ezinye zazo ziphethwe ngumuntu, ezinye ngama-algorithms, kanti ezinye zizenzekelayo eziziphindaphinda izinkomba noma amasu wecebo lokutshala imali. Okuthandwa kakhulu kuvame ukusebenza ngamasheya, kepha kunganikezelwa kweminye imikhiqizo efana nezinto zokusetshenziswa.
Yini okufanele uyicabangele lapho ukhetha ukuthi uzotshala kuphi
Kunezici ezahlukahlukene ezizonquma ukuthi ungatshala kuphi ezimakethe zamasheya. Isikhathi lapho utshalomali lwethu sizimisele ukulubekezelela, izinga lenzuzo esiliphishekelayo, ukuthi sizimisele ukuthatha ingozi engakanani, njll.
Ubude besikhathi: Ingxenye enkulu yamafilosofi ahlukene okutshalwa kwezimali angatholakala ezikhathini zesikhathi esizibekele zona. Ngakho kukhona kusuka esikhathini esifushane kuya esikhathini eside. Uma isikhathi eside lezo zimali zibekiwe, maningi amathuba okuthi kungalahleki kutshalomali. Kodwa-ke, lo mkhathizwe omkhulu unomlingani weqiniso lokuthi asikwazi ukuba nemali ngokushesha. Ukuqinisekisa imali esetshenziswayo ukuze siphile, kuzosisiza ukuthi sinqume ukuthi yikuphi ukuguquguquka kwesikhashana esinakho.
Ukulingana, konke mayelana nokuthi kusebenza kanjani
Inzuzo: Izinga lenzuzo elilandelwayo lingahluka ngokuya ngenkampani nomkhakha othintwayo. Ukusebenza ngezinga elithile lesilinganiso akufani nokutshalwa kwemali okuhleliwe. Le bhonasi yenzuzo ivame ukuhambisana nezingozi eziphakeme. Ekusebenzeni okusetshenzisiwe, inhlokodolobha ingalahleka noma iphindwe kabili, kanti kowesibili, ukusebenza kwemali engenayo engaguquki, bekungeke kwenzeke (kungenzeki) ukuthi kwenzeke lezi zimo ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, inzuzo ingatholakala ngokubheka isikhathi eside, noma futhi nezinkampani ezinokukhula okubalulekile. Ukwazi ukuthi ungatshala kuphi ukuze uthole inzuzo etholakalayo kunengqondo kakhulu.
Ubungozi: Yikuphi ukulahlekelwa esizimisele ukukuthathela inzuzo engaba khona? Ukutshalwa kwezimali okugxilwe esikhathini esifushane akufani nokwesikhathi eside. Kunemicimbi eminingi engenzeka ngesikhathi esibekiwe eside, ngakho-ke ingozi ihlala ikhona. Kodwa-ke, kunemicimbi eyenzeka ngezikhathi ezithile eyenza ukuthi intengo yezimpahla yehluke esikhathini esifushane, ngakho-ke kubalulekile futhi ukwazi ukuthi singafika kude kangakanani. Kufanele njalo uphishekele ubungozi obuncane, ukuze uqinisekise ukuzuza, kepha uma ubungozi bukhulu, kufanelekile.
Umehluko phakathi kokutshalwa kwemali nokucatshangelwa
Okokugcina, futhi uqobo kuyinto ebaluleke kakhulu, kubalulekile ukuhlukanisa utshalomali ekuqageleni.
Ukuqagela ukuthenga noma ukuthengiswa kwanoma iyiphi impahla ngokulindela ukuthi izokhuphuka noma yehle ngentengo esikhathini esizayo. Ngakho-ke, indima yomqageli ukulindela intengo ezayo yomkhiqizo awuthengile. Ukubikezela okunembe kakhudlwana, imiphumela iba ngcono. Lolu hlobo lokunyakaza luvame ukubonakala ngokuhlaziywa kwesimo, ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe, noma yisiphi isibonakaliso noma isisusa esenza intengo ilindele. Isibonelo, ukuthenga igolide ngokulindela ukuthi lizokhuphuka noma lifake i-oda lokuthengisa ku-Eurodollar ngokulindela ukuthi i-euro izolahlekelwa yinani, idola lizothola inani, noma kokubili.
Ukutshalwa kwemali kuvame ukuthengwa kwempahla ngokulindela ukuthi kuzokwenziwa imbuyiselo ephezulu kwenhlokodolobha enikelwe. Uma ukuqagela kuthanda ukuba kwesikhashana (hhayi njalo, kunokucatshangelwa kwesikhathi eside), utshalomali luvame ukubheka isikhathi eside. Kuleli qophelo umtshalizimali wenza izibalo ezifanele lapho azama khona ukuthola imbuyiselo yemali futhi amqinisekise ngayo. Uma inhloso ifinyelelwa, impahla ethengiwe ingakhuphuka ngenani ukuze kuthi ngesikhathi sokuthengisa ikhiqize lezi zimali ezinkulu njengoba kwenzeka kumqageli. Njengokwehluka, imbuyiselo okungenzeka uyitholile, njengasenkampanini yezinkampani eziningi ezibalwe ohlwini, ithola izinkokhelo ezikhokhelwe ngendlela yezabelo. Ukujwayela ukuthi esikhathini eside esizayo kuzofanele kungezwe kuzinzuzo zemali, ukubona imbuyiselo ephelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Ungatshala kuphi ezimakethe zamasheya
Isikhwama sezimo eziphuthumayo